ပာင့်အင်း အန်ကယ်။ပာင့်အင်း အန်ကယ်။ - နည်းပညာ
4/29/2012 12:56:00 AM ဟာသ 1 comment
လူတစ်ယောက်က အိတ်ကြီးနှစ်အိတ်ကို စက်ဘီးပေါ်တင်လာတာတွေ့ တော့
နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဂိတ်က ရဲက အိတ်ထဲ မှာ ဘာတွေပါလဲ လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စက်ဘီးသမားက သဲတွေလို့ ဖြေတာနဲ့စစ်ကြည့် တော့လည်း သဲကလွဲရင် ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ စက်ဘီးသမား က နေ့တိုင်းပဲ သဲအိတ်တွေ တင်ပြီး ဖြတ်နေတာ ကို ရဲက တစ်ခုခုကို မှောင်ခိုကုန်ကူးနေမှန်း
သိပေမယ့် လက်ဆုပ်လက် ကိုင်ပြလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။
ခြောက်လလောက်ရှိလာတော့ မနေနိုင်တဲ့ အဆုံးဖွင့်မေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ငါ့ကို အမှန်အတိုင်းပြော..ငါမင်းကိုမဖမ်း ဘူး" ဆိုပြီးမေးတော့
အဲဒီ လူပြန်ဖြေတာက "ကျွန်တော်ကစက်ဘီးတွေ မှောင်ခိုသွင်းနေတာပါ"တဲ့။
တခါက အညာဘက်မှ တောသားကြီးတစ်ဦးသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိဈေးတစ်ခုတွင် ကုန်များဝယ်ရန် အကြောင်းဖန်လာသတဲ့ ။
ရန်ကုန်ကိုလည်း တစ်ခါမှမရောက်ဖူး ၊ မိမိတို့ရွာမှ ကားစီးသွားလျှင် ရောက်တယ် ဆိုတာတော့ သိတယ်တဲ့
ရန်ကုန်သားဖြစ်ဖူးသော ရွာဦးဆရာတော်က လိပ်စာလေးရေးပေးကာ ကူညီလိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့ ။
အဲဒါနဲ့ပဲ အရဲစွန့်ပြီး ရန်ကုန်သို့ တက်လာခဲ့တော့တယ် ။
ရန်ကုန်ကားဂိတ်ရောက်တော့ တောသားတို့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်း မသိဘူးတဲ့ ။
ယောင်ပေ ယောင်ပေနဲ့ အနားကဖြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို
ဘုန်းဘုန်းရေးပေးလိုက်တဲ့ စာကိုပြပြီး အကူညီတောင်းလိုက်တာ ပေါ့ ။
ထိုလူကကူညီရှာပါတယ် ။ သူ့ကို ကားတစ်စီးပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်ကို စပယ်ယာကို ပြောထားပေးခဲ့သတဲ့ ။
သူကိုယ်တိုင်လဲ မှတ်ထားတာပေါ့ ။ ဘာတဲ့ “မင်္ဂလာဈေး” ဆိုလားပဲ ။
ကားစီးလာရင်း ခဏမျှကြာတော့ သူတော်တော်လေး ညောင်းလာတော့တယ် ။
ရွာကနေကားစီးလာရတဲ့ခရီးကလဲ ရှိခဲ့သေးတာကိုး ။ တော်တော်လေး ပင်ပန်းလာတယ်ထင်ပါရဲ့ ခေါင်းထဲလဲ
မူးနောက်နောက်ဖြစ်လာတာနဲ့ သူ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို အကူညီ တောင်းလိုက်သတဲ့ ။
“ အမ ဟိုဘက်နဲနဲလေးတိုးပေးပါလား ၊ ဖင်လေးနဲနဲချချင်လို့ပါ ”
“ ဘာ……. ဘာပြောတယ်……… ပြန်ပြောကြည့်စမ်းပါဦး ”
“ ဟုတ်ကဲ့….. ကျွန်တော်သိပ်ညောင်းလာလို့ပါဗျာ ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေါ့ ဖင်လေးချချင်လို့ပါဗျာ နော်…. နော်လို့……”
“ ရှင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား ၊ လူကို ဘယ်လိုအစားမျိုးထဲက အောင့်မေ့လို့လဲ ၊ ဒီမှာကားစပယ်ယာ ကားကိုအခုချက်ခြင်း ရပ်ပေးပါ ။ ”
အော်ကျယ်အော်ကျယ် အသံများကြောင့် လူတွေ အကုန်လုံး ၀ိုင်းကြည့်ကုန်ကြတယ် ။ ဒီမှာစပယ်ယာလေးရောက်လာပြီး
“ ဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျာ ”
“ ဒီမှာ ကျွန်မကို လာဆော်ကားနေတယ်လေ ၊ ဒီလိုလုပ်လို့ရမလား ဟင်းးးးးး ၊ ခုချက်ချင်း ရဲစခန်းသွားမယ်”
ဒီမှာ စပယ်ယာလေးက “ ကဲ ဒီက အကိုကြီးက ဘယ်လိုစော်ကားတာလဲ ပြော ”
“ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ငါကညောင်းလွန်းလို့ ဖင်လေးချချင်တယ်လို့ ပြောတာပါကွာ ”
“ ဟာ မှားကုန်ပါပြီ အကိုကြီးကလဲ အဲလိုမပြောရဘူးလေ ထိုင်ချင်တယ်လို့ ပြောရတယ်ဗျာ ဒုက္ခပါပဲဗျာ”
“ ဆောရီးပါအမရယ် ဒီကအကိုကြီးက အညာသားမို့ စကားပြောမတတ်တာပါ ၊ ဟိုသဘောမျိုးပြောတာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ
ကျွန်တော်သူ့အစား တောင်းပန်ပါတယ်နော် အမ ။ ”
ကားစပယ်ယာလေး ၀င်ရှင်းပြတော့မှပဲ အားလုံး နားလည်သွားကြတယ်လေ ။
“ ကဲ အကိုကြီး ရှေ့မှတ်တိုင်ဆို အကိုကြီးဆင်းရမယ့် မင်္ဂလာဈေးမှတ်တိုင်ရောက်ပြီ ”
“ အေးအေး ကျေးဇူးပဲ ငါ့ကောင်ရာ ငါ့လခွေး မင်းကူညီလို့သာပေါ့ ”
“ ( _ )နံပါတ်ပါတဲ့ ကားကိုစီးနော် ” ကားပေါ်မှာလဲ ထိုင်ချင်တယ်ဆိုင် ထိုင်ချင်တယ်ပဲပြောနော် လို့မှာခဲ့လေ၏ ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရွာသားကြီးဟာ သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်လေးနဲ့ မင်္ဂလာဈေးကိုရောက်ခဲ့လေတယ် ။ ရွာကမှာလိုက်တဲ့ ကုန်တွေစုံအောင်
ပါလာတဲ့စာရွက်လေးနဲ့ တိုက်ရင်း ၀ယ်ရင်းနဲ့ အားလုံးဝယ်ပြီးသွားတော့ သူဝင်လာတဲ့ အပေါက်ကို လိုက်ရှာသတဲ့ ။
သွားပြီ…… အဲဒါနဲ့ အနီးမှာရှိတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်လိုက်တယ် ။
“ ဟို အမကြီး ကျွန်တော့ကို လူထွက်တဲ့ အပေါက်လေး နဲနဲပြပေးပါလား ဗျာ”
“ ဘာ……. ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့ကို လူထွက်တဲ့ အပေါက်လေး တစ်ချက်လောက် ပြပါလားလို့ ”
“ ရှင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား ” “ ဟဲ့ ဈေးကလူကြီးတွေကိုသွားခေါ်ပေးစမ်း ” “ xxxxxxxxxxxxxxxxx ”
ဈေးကလူကြီးတွေရောက်လာကြတော့တယ် ။ အညာသားလဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပေါ့
“ ကဲ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ဗျ ”
ဒီမှာ မိန်းမကြီးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်အောင် ပြောပြတော့တယ် ။ ဒီမှာလူကြီးတွေက……
“ ကဲ ခင်ဗျားက ဘာလို့ အဲလိုမေးတာလဲ ”ဆိုတော့
“ ကျွန်တော် ၀င်လာတုန်းက မှတ်မိတယ်ဗျ ၊ ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ မမှတ်မိတော့တာ
ဒါကြောင့် အဲဒီ အမကြီးကိုအကူညီတောင်းရတာပေါ့ဗျာ ”
“ သြော် ဒီလိုလား ”
“ ခင်ဗျားသွားရမှာက ( _ _ _ _ ) အတိုင်းပဲ ၊ ကဲမှတ်မိပြီနော် နောက်ဆိုဒီလို မမေးနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့လမ်းလို့မေးနော်လို့
“ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ နောင်ကြီးတို့ ကူညီလို့ပါပဲ ငါ့လခွေး ”
ဒီလိုနဲ့ရွာပြန်ရောက်ခဲ့တယ် ။ ရွာကအမျိုးတွေကတော့ မေးကြတာပေါ့ ။ ရန်ကုန်က ပျော်ဖို့ကောင်းလား ၊ ဘာလား ဆိုတော့
“ ဟေ့ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်ဆိုရင် ငါ့ပါးစပ်ကို တိတ်နဲ့ အရင်ကပ်ပြီးမှ လွတ်ဟ ” တဲ့...............................//
အိမ်အကူမ နှစ်ယောက်ဆုံကြသည်။ တစ်ယောက်က အသက်ကြီးကြီး။
'ငါတော့ အေ။ အားလုံးကိုငြီးငွေ့ လှပြီ။'
တစ်နေ့လုံး'ပာုတ်ကဲ့ မမ။ပာုတ်ကဲ့ မမ'နဲ့ အချိန်ကုန်နေရတယ်။
အသက်ငယ်သော အိမ်အကူမက ပြောသည်။
"ကျွန်မလဲ အရာရာကို စိတ်ကုန်နေပြီ။"
တစ်နေ့လုံး "ပာင့်အင်း အန်ကယ်။ပာင့်အင်း အန်ကယ်။"နဲ့ ငြင်းနေရတယ်..................................................//
mee April 30, 2012 at 3:24 AM